Lufthansa, Switzerland, Austrian, Brussels Airlines nendege kuenda kuUSA mushure mekurambidzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa, Switzerland, Austrian, Brussels Airlines nendege kuenda kuUSA mushure mekurambidzwa
Airlines • nhandare yendege • Austria Kuputsa Nhau • Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • LGBTQ • nhau • chengetedzo • Switzerland Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Lufthansa inogadziridza pane coronavirus
Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines neBrussels Airlines vachiri kubhururuka kuenda kuUnited States?
Mutungamiri weUSTrump nezuro akarambidza European Union neSwitzerland kufamba kuenda kuUnited States kusvika pakati pehusiku Chishanu. Nhungamiro itsva dzekufamba dzakarairwa nehutungamiriri hweUS dzakarambidza vatakuri kubva kuEuropean Union, Switzerland, nedzimwe nyika kuti vapinde muUnited States of America. Vagari vekuUS uye maGreen Card Holders vacharamba vachibvumidzwa kujekesa US Immigration.
Lufthansa Group Airlines, zvakare chikamu cheStar Alliance ichangobva kutaurwa eTurboNews icharamba ichipa ndege kuU.SA kubva kuGerman, Austria, Switzerland neBelgium. Dzimwe ndege dzichava mukushandira pamwe uye kugoverana pamwe neUnited Airlines, zvakare inhengo yeStar Alliance.
Lufthansa Group richaenderera mberi richishanda nendege kubva kuFrankfurt kuenda kuChicago neNewark (New York), kubva kuZurich kuenda kuChicago neNewark (New York), kubva kuVienna kuenda kuChicago, uye kubva kuBrussels kuenda kuWashington kupfuura 14 Kurume, nekudaro ichichengetedza imwe traffic yemumhepo. kubatana kuUSA kubva kuEurope.
Airlines pari zvino ari kushanda pane imwe nzira yekufambisa yeUSA.
Vapfuuri vacharamba vachikwanisa kusvika kwese kunosvika mukati meUSA kuburikidza nemaUS hubs uye nendege dzinobatanidza dzinoshumirwa nendege yemumwe, United Airlines.
Uye zvakare, dzimwe dzendege dzese dzeUS dzichamiswa kudzamara kuziviswa nekuda kwezvirambidzo zveUS zvekutonga, kusanganisira zvese kubva kuMunich, Düsseldorf neGeneva.
Lufthansa Boka richaenderera mberi nekushandira kwese kwese kuCanada kusvika chimwe chiziviso.
Sezvakarongwa, nendege dzeLufthansa Group dziri kupa 313 kubatana kunzvimbo 21 muUSA kubva kuEurope munguva yechando, iyo ichiri kushanda kusvika 28 Kurume.
Iko kukanganisa kwechirongwa cheLufthansa Group chekubhururuka nekuda kweiyo ichangopindurwa yekupinda mirawo yeIndia is izvozvi zviri kuongororwa.